गुठि बिधेयक बिरोध गर्नुस, थारुलाइ धोती नभन्नुस, भिडको राजनितीले देशमा आगो बल्ला। - Sagun Siwakoti
HomeArticlesगुठि बिधेयक बिरोध गर्नुस, थारुलाइ धोती नभन्नुस, भिडको राजनितीले देशमा आगो बल्ला।
गुठि बिधेयक बिरोध गर्नुस, थारुलाइ धोती नभन्नुस, भिडको राजनितीले देशमा आगो बल्ला।
गुठि बिधेयकले देश कति जटिल अबस्थामा छ देखायो। सरकारको यस कदमबाट जातियताका नारा हरु प्रकट भए, जबकी गुठि त लिछिविकाल देखि सबै जातिले मान्दै आएका हुन। पशुपतिनाथ र जानकी मन्दिर पनि गुठि बाट चलेको छ। जानकी मन्दिर चलाउने मधेसी पनि गुठि बिधेयक को बिरोधमै धन, त्यसो भए नेवार किन बाहुन, थारु र मधेसी समेतलाइ गालि गर्दैछन? यहा जातियता को राजनिति गर्न कस्ले आगो लाउन खोज्दैछन। आगो लाउने सरकारका सल्लाहकार देखि अभियन्ता सम्म छन। एकातिर प्रस्ताव र अर्कोतिर बिरोधमा मिसिएको छन।
एउटा थारु सभासदले बोल्यो भन्दैम थारुलाइ धोती बाहुन को चम्चा भन्नु वैभबशाली नेवार स्भयताको स्वभाव होइन। यहा आदिकाल देखि मानिस सङै बस्दै आएका छन र सनातन धर्मले हामि सबैलाइ जोडेको छ। गुठि बिधेयकको बिरोधमा अनुसन्धनात्मक बिश्लेषण युबराज सङग्ौला र मोहन बन्जाडे जस्ता बाहुनले पनि गरेकै छन। जातिय भिडमा गयपछी मानिसले आफु शक्तिशालि र मलाइ कस्ले छुन्छ भन्दै सबै अरु जातलाइ गालि गर्न थाल्छ। जब यस्तो दुइटा भिड बन्छ अनि देशमा आगो बल्छ। कुरो भिडको र नेवारको मात्र होइन। धर्म मान्ने कुन एउटा बाहुन होला जस्ले
गुठि बिधेयक ठिक भनेको छ? यो त एशु मान्रे नेपालमा धर्म मान्ने बीचको लडाइ हो। बाहुन, थारु वा नेबार को होइन।
इतिहासमा पहिले देखि सबै जात मिल्दै बसेको छन। दोलखामा नेवार राजाको दरबार अहिले पनि त्याहाला सिबाकोटी हरुले पुजा गरेर राखेको छन। उनीहरु सङै पृथ्वीनारायण शाह लडाइ गरेर हारेको र कालिन्चोक भगवतीले नेबार र सिबाकोटिलाइ आधा आधा तरबार देको थियो रे। राजा र मन्त्रि हुनु भनेर भन्ने इतिहास कसले हेर्ने। यो एकता पृथ्वीनारायण शाह ले बनाकोकी कालिन्चोक देवीले? काठमान्डुका राजाका मैथिल रानी थिय। त्योसो भय मैथिल र थारु बुहारि भय कि धोती? यसरी नेपालको हरेक जाति गासियको छ।
एउटा बाहुन मन्त्रिले केहि गर्यो भने पुरै बाहुनलाइ गालि यउटा थारु केहि बोल्यो भने धोती? कस्तो बिबेक हो यो? भिडमा बुद्दी गुम्छ। एउटा नेवार लेख्छन थारुले ५ लाख उतारे हामि दशलाख उतार्छौ। यो माहाभारत को लडाइ हो र? यसरी जातियतामा लाग्दै जाने हो भने हिन्दु धर्म त मासियो मासियो। नेबार त राष्ट्रिय सम्पदा हो। मिलेर जोगाम। हिन्दु धर्मको लागि भएपनि जातियता बाट अघि बढम नत्र जस्तो एशुबादीले चाहेको तेस्तै हुन्छ।
ट्राफिक नियम नमान्ने विभन्न किसिमका डनहरु
व्यंग्य : ज्योतिषको भबिस्य सही, गोर्खामा २ रेक्टर को भुकम्प